Kooxda Al-Shayaadiin oo Fatwo ka soo saartay hadalkii Siyaasi Cabdirraxmaan Cabdishakuur. – Kismaayo24 News Agency
by admin 5th December 2019 0254
Warbaahinta Al-Shayaadiin ee Al-Andalus ayaa barnaamij gaar ah ka diyaarisay hadal dhowaan ka soo yeeray C/raxmaan C/shakuur Warsame oo uu ka jeediyay Xaflad ka dhacday dalka Jarmalka.
Barnaamijkan oo lagu wareystay Qaar ka mid ah taageerayasha Al-Shayaadiin ayaa si cad u sheegeen in C/raxmana C/shakuur ku beeniyay xadiis ka sugnaaday Nabi Muxamed (NNKH), waxaana ay ku xukmiyeen inuu ku dhacay Gaalnimo.
Arrimo waa weyn oo khatar ah ayuu ninkaan ku dhacay, gaalnimo waa ku jiraa, axaadiis dhowr ah ayuu beeniyay, sida soo socotana aayaad ayuu beeninayaa, axaadiista Nabi Muxamed NNKH ka sugnaaday ayuu ka dhigay wax rag jeebka kala soo baxay”ayuu yiri Sheekh Jaamac Cabdisalaan.
Gudoomiyhii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit oo magacaabay Guddiga xil wareejinta
Sakariye Sakariye 25th January 2018
SH Mxamed Idiris Aabihii Dacwada Koonfur Afriko. W/Q Muhamed Aadan Cabdille